Yan Aung: ဧ၀ံမေသုတံ - လွတ်လပ်ခြင်း
မိမိအကျိုးလည်းလုပ်တယ်၊ အများအကျိုးလည်းလုပ်တယ်၊ မမှန်တာကိုလည်း မလုပ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀ဟာ တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ သိနေတဲ့သူဟာ ညှိုးငယ်တဲ့စိတ် ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ဘူး။ သူ့ဘ၀သူ ကျေနပ်ပြီး သူ အင်မတန် ပျော်နေတာပဲ။ ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်နေတယ်။
(နှာ ၁၅၃၊ “တွေးမိတိုင်းပျော်တယ်”၊ ဆရာတော် ဦးဇောတိက)
လွတ်လပ်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့သူဟာ လွတ်လပ်မှုနဲ့ မတန်ဘူး။ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ခွင့် ရှိနေတာကို မသုံးဘဲနဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ကို လိုချင်တာဟာ အဆင့်ကျော်နေပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုနဲ့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြန်အလှန် လေးစားမှုဟာ လက်တွဲပြီးတော့သွားတယ်။
(နှာ ၁၀၂၊ “တွေးမိတိုင်းပျော်တယ်”၊ ဆရာတော် ဦးဇောတိက)
လူတွေရဲ့ ချီးမွမ်းမှု၊ ကဲ့ရဲ့မှုကို မတုန်လှုပ်တဲ့သူဟာ သူ့ဘ၀ကိုသူ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖန်တီးနိုင်တယ်။
I create my meaning. I create my values. That is the highest freedom.
ငါ့ဘ၀အဓိပ္ပါယ်ကို ငါဖန်တီးတယ်၊ ငါရွေးချယ်တယ်။ ငါ့အတွက် ဘယ်ဟာ တန်ဖိုးရှိတယ် ဆိုတာကို ငါဖန်တီးတယ်၊ ငါရွေးချယ်တယ်။ အဲဒါဟာ ငါ့ရဲ့ အမြင့်ဆုံးလွတ်လပ်မှု ဖြစ်တယ်။
(နှာ ၁၁၈၊ “တွေးမိတိုင်းပျော်တယ်”၊ ဆရာတော် ဦးဇောတိက)